Taolam-paty 3gony miisa 150 no azon ny polisy .tao Ampasinahampoana sy Andranara – Tolagnaro.
Tanora mbola herotrerony miisa enina no tra-tehaka tamin’izany. Saika foana tsy misy taolana avokoa ny fasana any an-toerana. Mbola tazonina ao amin’ny komisaria bazaribe hanaovana fanadihadiana izy ireo.
Dia mbola arovan’ny polisim-pirenena ihany ny olona maloto eo anivon’izy ireo. Tsy iza izany fa ilay mpiambina manokana ny minisitry ny polisy teo aloha izay sarona nanao fanafihana tetsy Andoharanofotsy. Nolazain’ny polisy indray fa kisendrasendra no nahatongavany teo ary avy niasa alina izy nandeha an-tongotra hody ka nahita ny fifanjevoana teo amin’ny zandary sy ny jiolahy. Manabarabara olona tanteraka !
Tsy mitsahamitombo ireo tsy manara-dalana eo amin'ity sehatra ity ka mahatonga endrika ratsy amin'ny ankapobeny mihitsy eo amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Hatramin'ny fahavalon'ny aprily no tsy maintsy anaterana ny mombamomba ny foto-drafitr’asa, eny amin'ny ministera ka ahafahana manome sazy ireo izay mbola tsy manaraka ny fepetra rehetra.
Mbola hitohy ny andro ratsy sy ny rotsankorana ao anaty ny telo andro. Any amin'ny tapan'avaratry ny nosy no tena hanorana'. Hiova rivotra ihany koa ny any atsinanana. Efa misy sahady ny rivozoa mananontanona amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika hoy ny meteo ka mitondra ny orana be amin'ny faritra maro manerana ny nosy.
Handray fepetra amin'izay ny ministeran'ny angovo raha toa ka tsy milamina ny disasisa eo amin'ny sendika sy ny Tale jeneralin’ny Jirama. Miantso fitadiavana vahaolana malaky ny ministera mba tsy ny vahoaka no atao fahirano amin'ny jiro sy rano tapaka hoy ny ministry ny angovo. Horonantsarimihetsika efa niverimberina hatrany ny toa izao efa hatramin’ny andron’ny tetezamita.
AMPAMOAKAN’I JEAN NIRINA
Milaza ny hanao ampamoaka goavana anio ny olona akaiky an’i Jean Nirina Rafanomezantsoa eo anivon’ny fikambanana Hafari Malagasy. Holazain’izy ireo ny anaran’ireo trondro vaventy ao ambadiky ny ady tany eto Antananarivo, raha araka ny fampitam-baovaony omaly. Hampiantso mpanao gazety izy ireo ary dia hotononiny tsirairay eo ireo karàna sy gasy mpiray tsikombakomba amin’ny halatra tany.